I-Honor V20 iya kuxhotyiswa ngekhamera engasemva engama-48 MP | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Honor V20 iza kufika nekhamera engasemva eyi-48 megapixel
Abalandeli beMbeko balinde ngolangazelelo umntu oza kungena ezihlangwini zomnxeba ophambili Imbeko V10 ukusukela kunyaka ophelileyo. Ngokwento eyayilindelwe, ifowuni yayiza kuthiwe thaca nge-22 kaDisemba eParis, eFrance. Oku kunokuba njalo.
Umenzi waseTshayina uqalile ukuthumela izimemo zokupapashwa kwe-Honor V20 e-China. Isimemo esifunyenwe yi-CNMO sityhila oko i-Honor V20 iya kuba semthethweni nge-26 kaDisemba kwilizwe laseAsia. Iya kuxhotyiswa ngekhamera eyi-megapixel engama-48 ngasemva.
Imifanekiso yesimemo ekwabelwana ngayo kwisithuba ityhila ukuba i-Honor V20 iya kuba I-smartphone yokuqala yokuba nekhamera engasemva engama-48 ye-megapixel, Enokuba sisivamvo Sony IMX586. Iyakubhengezwa nge-26 kaDisemba kwiYunivesithi yaseBeijing yeThekhinoloji e-Beijing, China. Isicatshulwa esikhankanywe kwisimemo sikhulu phezulu, kodwa sincinci njengoko usihla ezantsi. INhlonipho icebise iindwendwe ukuba zize neleta yesimemo kumsitho wokuphehlelelwa kwe-Honor V20.
Iingxelo zamva nje ziveze ukuba i-Honor V20 inegama lekhowudi, elithi "iPrinceton". Kukho amarhe okuba I-smartphone inempawu zoyilo lomngxunya esikrinini, Njenge entsha I-Samsung Galaxy A8s. Iphaneli yayo iya kuxhasa isisombululo se-FullHD + se-2,310 x 1,080 pixels. Ukongeza koku, kuya kuza kufakelwe kwangaphambili I-Android 9 Pie. I I-chipset ye-Kirin 980 izakubakhona phantsi kwesixhobo.
Akukho lwazi lukhona ngoku kumthamo webhetri yesixhobo. Ngaphandle koku, iqinisekisiwe ngesiqinisekiso sayo se-3C e-China, ukuba iya kuxhasa i-22.5W ukubiza ngokukhawuleza.
Kwelinye icala, kukwathethiwe oko ixhotyiswe ngento ebizwa ngokuba yi '3D Camera'. Iya kuba nakho ukwenza iimodeli ze-3D zabantu kunye nezinto ze-AR. Oku kubonisa ukuba ifowuni iya kubandakanya ikhamera ye-3D ToF (Ixesha leNdiza) yesitiriyo. Ezinye iinkcukacha zayo ziphantsi kwesisongeli. Nangona kunjalo, i-Honor V20 iqikelelwa ukuba ifike kwiimarike zaseTshayina ngexabiso lokuqala le-2,799 yuan (~ 355 euros).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Honor V20 iza kufika nekhamera engasemva eyi-48 megapixel
Isamsung yazisa isikhumba esitsha sokwenza ngokwezifiso zeFortnite
Uyithumela njani imiyalezo yelizwi ekhaya ngeKhaya likaGoogle